ဆ ရာ မ ရဲ့အ ဖြစ် – Hlataw.com
ဟဲ့..ကျော်ေ ကျာ် ဘာလုပ်နေတာလဲ… ဆရာမ ဒေါ်ခင်သီတာစိုးရဲ့ အသံကြောင့် စာသင်နေတုန်း သူမတင်ပါးကိုငေးကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်သတိဝင်လာပါတယ်။ လာစမ်း…နင်အခန်းရှေ့ထွက်ခဲ့စမ်း..။ ဆရာမကကျွန်တော့ကို ခေါ်လိုက်ပါတယ်. ခုနကငါရှင်းပြနေတာနားလည်ရဲ့လား….ရှင်းရောရှင်းရဲ့လား။ ဗိုက်ခေါက်ကိုသူမလက်ချောင်းဖြူဖြူသွယ်သွယ်လေးတွေနဲ့ဆွဲလိမ်လိုက်တာကြောင့် ကျွန်တော်အနည်းငယ်နာသွားတယ်။ နင်အဲ့ဒါကြောင့်လဲ ဒီအသက်အရွယ်ထိ(၁၀)တန်းမအောင်တာ..။ တကယ်တော့အတန်းထဲမှာ ကျွန်တော်အသက်အကြီးဆုံးပါ.။ အသက်က(၁၈)နှစ်ကျော်ပါပြီ ကျောင်းထားတာနောက်ကျတာရယ်.. (၄)တန်းနဲ့ (၈)တန်းမှာ (၁)နှစ်စီကျပြီး (၂)နှစ်တက်ခဲ့ရတာကြောင့် (၁၈)နှစ်ကျော်မှ (၁၀)တန်းရောက်ခဲ့တာပါ။ အဲ့တော့..နင်အတန်းရှေ့မှာ နားရွက်ဆွဲပြီးထိုင်ထလုပ်စမ်း..။ အတန်းထဲကကောင်မလေးတွေနဲ့ ယောင်္ကျားလေးတွေကလှောင်ပြုံးပြုံးကြည့်နေကြပါတယ်။ သူတို့ကကျွန်တော့ကို လှောင်နေကျဖြစ်တာကြောင့် ကျေနပ်အားရတဲ့အကြည့်တွေနဲ့ကြည့်နေတာပါ။ ကိုယ့်နားရွက်ကိုယ်ဆွဲကာ ထိုင်ထလုပ်နေရပါတယ်။
တစ်..နှစ်..သုံး…လေး အခန်းထဲမှ လှောင်ပြောင်တဲ့ အသံများထွက်ပေါ်လာပါတယ်.။ ၀မ်းနည်းစိတ်ကြောင့် မျက်ရည်တွေလဲကျလာပါတယ်။ ကဲ..ကဲ..အားလုံးတော်ကြ..စာဆက်သင်မယ်… ဟိုကောင်…ကျော်ကျော်..နင်ကိုယ့်နားရွက်ကိုယ်ဆွဲပြီး အတန်းရှေ့မှာမတ်တပ်ရပ်နေ..။ ဆရာမဒေါ်ခင်သီတာစိုးက ကျွန်တော့ကို ပြောလိုက်ပြီးသူမကစာဆက်သင်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အတန်းရှေ့မှာ မတ်တပ်ရပ်လို့ပေါ့။ သူမကဒီကျောင်းကိုပြောင်းလာတာ မကြာသေးပါဘူး။ ဆရာမက (၂၅)နှစ်လောက်ရှိပါပြီ။ ဇီဝဗေဒဆရာမပါ။ အသားဖြူဖြူ၊၊ အရပ်(၅)ပေ (၄)လက်မလောက်ရှိပါတယ်။ ရုပ်ကလည်းတော်တော်ချောတယ်။မျက်နှာလေးကဖွေးအိနေပြီး နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးကို နှုတ်ခမ်းနီ အမြဲဆိုးလေ့ရှိပါတယ်။ တင်ပါးတွေကလည်းတော်တော်လှပါတယ်။ ဒါကြောင့်စာသင်နေတုန်း ၀ှိုက်ဘုတ်မှာ စာရေးနေတဲ့ သူမတင်ပါးတွေကို ငေးကြည့်မိနေပြီး စာသင်တာကို စိတ်မရောက်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်အခုလိုခံလိုက်ရတာပါ။ သူမက စာသင်ခုံပေါ်တက်ပြီးစာသင်နေတဲ့အချိန်မှာ စာသင်ခုံအောက်မှာ နားရွက်ဆွဲပြီး မတ်တပ်ရပ်နေရတဲ့ ကျွန်တော့်အဖို့သူမလှုပ်ရှားလိုက်တိုင်း ကျောင်းစိမ်းလုံခြည်အောက်က တစ်ချက်တစ်ချက်ပေါ်ပေါ်သွားတဲ့ ခြေသလုံးဝင်းဝင်းလေးကိုကြည့်ပြီး ရင်တွေတဆတ်ဆတ်ခုန်လာသလိုလိုခံစားလိုက်ရပါတယ်.။ထိုမြင်ကွင်းတွေကို မြင်ရရင် ဆရာမဒေါ်ခင်သီတာစိုး အပြစ်ပေးတာကို ကျေနပ်မိသလိုလို ဖြစ်နေတာကိုက ထူးဆန်းနေပါတယ်။
(၂) အား.ကျွတ်စ်ကျွတ်စ်… ကျွန်တော်စုပ်သက်ညဉ်းညူလိုက်သည်။ နေ့လည်က ဆရာမရိုက်ခဲ့သော တင်ပါးကနာကျင်နေတာကိုး။ ဒါပေမဲ့ ဆရာမအပေါ် မကျေမနပ်မဖြစ်မိဘဲ..ဒီလိုခဏခဏရိုက်ခံချင်မိနေသော မိမိစိတ်ကို မိမိအံ့သြမိသည်။ ထိုဝါသနာကား ကျွန်တော် ၁၅ နှစ်သား အရွယ်လောက်ကတည်းကစတင်ခဲ့သည်။ မိန်းကလေးများ၏ ခြေချောင်းလှလှလေးတွေမြင်လျင် ထိုခြေဖ၀ါးများကို ယက်စုပ်ပေးချင်လာသည်။ တင်ပါးလှလှတွေမြင်လျင် ထိုတင်ပါးတွေနဲ့ မျက်နှာကိုဖိထိုင်ခြင်း ခံယူလိုလာသည်။။ ဘာကြောင့် ဒီလိုဖြစ်မှန်းမသိ။ တိုးတက်လာသော ခေတ်နှင့်အညီ ဖုန်းတွေပေါများလာတော့ အင်တာနက် များမှာ ကျွန်တော်ဖြစ်နေသော ခံစားချက်နှင့် ကိုက်ညီမှုကိုရှာတွေ့ခဲ့သည်။ ထို ခံစားချက်မှ ကျွန် တစ်ယောက်၏ခံစားချက်ပင်တည်း။ ဆရာမဒေါ်ခင်သီတာစိုးကား ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသို့ ပြောင်းလာတာ နှစ်လခန့်ရှိပြီ။ ကျွန်တော်၏ မိထွေးဖြစ်သူ ဒေါ်ရီမို့မို့မောင်၏ ညီမ။ ဖခင်ဖြစ်သူကား အလုပ်များသဖြင့် အိမ်မှာအမြဲမရှိ.။ ခရီးထွက်နေတာများသောကြောင့် ကျွန်တော့်ကိုဂရုမစိုက်နိုင်.။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်လည်း လွတ်လပ်ချင်တိုင်းလွတ်လပ်နေသည်။မိထွေးဖြစ်သူနှင့်သာ အနေများသည်။ ပြောရလျှင်တော့ ဆရာမဒေါ်ခင်သီတာစိုးနှင့် မိထွေးဖြစ်သူတို့ကို ကျွန်တော်စိတ်ထဲကပစ်မှားနေကျ။ အခြားလိုပစ်မှားတာတော့မဟုတ်.။ တစ်ခါတစ်ရံ အိမ်မှာ မိထွေးဖြစ်သူမရှိခိုက် မိထွေးဖြစ်သူ၏ ပင်တီတွေ၊ ထမိန်တွေကို ချွတ်ထားခဲ့တာကို ခိုးခိုးရှုခြင်း၊မျက်နှာပေါ်တင်ကာဂွမ်းထုခြင်းစသည်တို့ကိုလုပ်လေ့ရှိသည်။ ထိုတို့ ပင်တီများ ထမိန်များကို မျက်နှာပေါ်တင်ပြီး အနံ့အသက်များကို ရှုလိုက်ရလျှင် လီးက အလိုလိုတောင်လာသည်။ ထိုသို့ထမိန်များ ပင်တီများကို ယက်ပြီး ဂွမ်းမကြာခဏထုလေ့ရှိတာကို မိထွေးဖြစ်သူကတော့ မသိ.။ သူမသိလျှင်မလွယ်။ ပြောရလျှင်တော့ မိထွေးဖြစ်သူ ဒေါ်ရီမို့မို့မောင်ကလည်း တော်တော်လှသူပင်။ အသက်က ၃၀ ကျော်ဆိုပေမဲ့ ကျွန်တော့်ဖခင်နှင့် ကလေးမရသေးသဖြင့် တစ်ခါတစ်ရံကြည့်လျှင် အပျိုလိုလိုထင်ရအောင် ပြင်ဆင်တတ်သည်။
(၃) အမ လင်ပါသားလေးကတော့ အခန်းထဲမှာဆိုးသလားမမေးနဲ့ မမို့ရေ.။ ခစ်.ခစ် နင်ကဒီလောက်ဘဲသိတာကိုးဟ။ ကျောင်းပိတ်ရက်တွင် ခင်သီတာစိုးအိမ်သို့ အမဖြစ်သူရီမို့မို့မောင် လာလည်သဖြင့် ခင်သီတာစိုးက အမဖြစ်သူရီမို့မို့မောင်၏ လင်ပါသားလေးအကြောင်း ဖောက်သည်ချနေခြင်းဖြစ်သည်။အဟက်. နင်က အခန်းထဲမှာ နင့်တင်ပါးကို ကြည့်ပြီးပစ်မှားနေတာလောက်ဘဲသိတာကိုး သီတာရဲ့။ ရီမို့မို့မောင် အပြောကြောင့် ခင်သီတာစိုးနားမလည်နိုင်ဖြစ်သွားသည်။ ဟင်..ဒါ့ထက်ဆိုးတာရှိသေးလို့လား..မမို့ရဲ့ပြောစမ်းပါဦး…။ ခစ်ခစ်…ရီမို့မို့မောင်က စကားမပြောနိုင်သေးဘဲ တစ်ခစ်ခစ်ရယ်လိုက်သေးသည်.။ ဒီလိုဟ…သီတာရဲ့ ဟိုတစ်ပတ်တနင်္ဂနွေနေ့ကလေ… ငါလည်း ဒီကောင်လေးကို အိမ်စောင့်ထားခဲ့ပြီး…အပြင်ထွက်တာ…။ လမ်းရောက်မှ ပိုက်ဆံအိတ်ပါမလာတာ သတိရတာနဲ့..အိမ်ပြန်သွားရော..။ အိမ်ရောက်တော့အိမ်တစ်ခုလုံး တံခါးတွေစေ့ပြီး တိတ်လို့။။ ဒါနဲ့ ဒီကောင်လေးဘေးအိမ်က သူ့သူငယ်ချင်းဆီအလည်သွားတယ်ပေါ့။ ထင်တာလေ..ငါက..။ အဲ့ဒါနဲ့ငါ့အခန်းထဲကို ၀င်မလို့ဟာ အသံလိုလိုကြားတော့အသာလေးချောင်းကြည့်တာ။ အဲ့ကောင်လေးလေ…ဘာလုပ်နေတယ်ထင်လဲ.။ ခင်သီတာစိုး စိတ်ဝင်စားးသွားသည်။ ဘာလုပ်နေလို့လဲ…မမို့ရဲ့ ပြောစမ်းပါဦး.။ ဒီကောင်လေ..ငါချွတ်ထားခဲ့တဲ့ ပင်တီတွေ ထမိန်တွေကို မျက်နှာပေါ်တင်ပြီး ဂွမ်းတိုက်နေတယ်လေ….. ပါးစပ်ကလည်း တအင်းအင်းနဲ့..အသံတွေထွက်နေသေးတယ်။ ခင်သီတာစိုးက မမို့ပြောလိုက်သော စကာအပေါ်အံ့သြသွားသည်။ဟုတ်လား..အမ..ဒါဆိုကျောင်းတုန်းက ကျွန်မတို့ကြားဖူးသလို..အပြင်မှာတကယ်ရှိတယ်ပေါ့ အဆောင်မှာ မိန်းကလေးအတွင်းခံတွေကို လိုက်ခိုးပြီးရှုတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုတာ။ အေး…ဟဲ့ငါလဲ…အခုမှဘဲ လက်တွေ့မြင်ရမှယုံတော့တာသီတာရေ။
(၄) ဟဲ့..ကျော်ကျော်..လာဦး… ကျောင်းမှပြန်လာပြီး အခန်းထဲဝင်ရန်ပြင်လိုက်သော ကျွန်တော်မိထွေးဖြစ်သူ ဒေါ်ရီမို့မို့မောင်၏ ခေါ်သံကြောင့် ခြေလှမ်းများတုံ့သွားသည်။ ဒေါ်ရီမို့မို့မောင်ကား ဧည့်ခန်းမှာ ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲကြည့်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ခြေတစ်ဖက်ကို ချိတ်ကာထိုင်နေခြင်းဖြစ်ပြီး သူမတင်ပါးများက သားရေဆိုဖာပေါ်တွင် ပိပြားကာ ၀ိုင်းစက်နေသည်။ ဘာပြောမလို့လဲ အန်တီ.။ အေး…နင်ဒီနေ့ကျောင်းကယူလာတဲ့ ရီပို့ဒ်ကဒ်ပြစမ်း…။ ပြသနာဘဲ…ဒီနေ့ကျောင်းက လပတ်စာမေးပွဲမှာ အရည်အချင်းစစ်ဆေးသည့် ကဒ်ပြားလေးတွေထုတ်ပေးသည်။ အဆင့်က နောက်ဆုံးကပြန်ရေလျင်အဆင့်တစ်။ နှေးတုန့်နှေးတုန့်လုပ်မနေနဲ့ နင့်ဆရာမငါ့ကိုတိုင်ပြီးသား။ ကဲ…ဒီတော့နင့်အဖေကို ငါပြောရတော့မယ်.။ နင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ဒုက္ခပါဘဲ…ဖေဖေသာဒီအကြောင်းသိသွားလျှင်တော့ အိမ်ကမောင်းထုတ်မှာသေချာသည်။ဖေဖေကား အခြားနေရာမှာ ခွင့်လွှတ်သော်လည်း ဒီနေရာမျိုးဆိုခွင့်လွှတ်မှာမဟုတ်။ မ…မလုပ်ပါနဲ့..အန်တီ…မပြောပေးပါနဲ့..။ ဟင်း..ဟင်း…ဒီလိုပြောလို့မရဘူးလေ..ကျော်ကျော်ရဲ့…။ အပေးအယူတော့ရှိရမှာပေါ့။ ဘယ်လိုအပေးအယူမျိုးလဲ အန်တီ။ ဖြစ်လိုရာဖြစ်စေတော့။ ဒါဆိုရင် နင့်အဖေကို ငါဒီအကြောင်း မပြောဘူး.။ နင်ငါခိုင်းတာလုပ်ရမယ်။ ဘာလုပ်ပေးရမှာလဲ…အန်တီ…။ ဒေါ်ရီမို့မို့မောင်ကား နှုတ်ခမ်းလေးများပွင့်ဟ လာပြီး တစ်လုံးချင်းပြောလိုက်သည်။ နင်..ငါ့ရဲ့ ကျွန်လုပ်ရမယ်ကျော်ကျော်..။ လုပ်နိုင်ပါ့မလား။ ခင်ဗျာ…ကျွန်တော့်နှုတ်မှ အံ့သြစွာထွက်ပေါ်လာသည့် စကားသံ။
(၅) ကျွန်….လုပ်ရမယ်..ဟုတ်လားအန်တီ။ ဘာလဲ..နင်က မလုပ်ချင်ဘူးလား။ ရတယ်လေ….နင့်အဖေဆီကို ငါဖုန်းဆက်လိုက်တော့မယ်။ ဒေါ်ရီမို့မို့မောင်ရဲ့ လက်က စားပွဲခုံပေါ်က တယ်လီဖုန်းဆီ လက်လှမ်းလိုက်သည်။ ကျွန်တော်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားသည်…။ မလုပ်..မလုပ်ပါနဲ့…သခင်မ…ကျွန်တော်သခင်မရဲ့ ငယ်ကျွန်လုပ်ပါ့မယ်။ စကားလုံးတွေက ပါးစပ်ဖျားကို ဘယ်လိုကနေဘယ်လိုရောက်လာမှန်းမသိ။ သူမရှေ့တွင်လည်း ဒူးကိုအလိုလိုထောက်မိရက်သားဖြစ်သွားသည်။ ရင်တွေလည်း တစ်ဆတ်ဆတ်ခုန်နေတာကို ကိုယ့်ကိုကိုယ်သိသည်။ ဟင်း..ဟင်း…ဒေါ်ရီမို့မို့မောင်က တိုးတိုးလေးရယ်လိုက်သည်။ ဒီလိုလိမ္မာစမ်းပါ….ငယ်ကျွန်ကြီးရဲ့ ဆိုပြီး သူမခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုမြောက်လိုက်ပြီး သူမရှေ့မှာ ဒူးထောက်နေသော ကျွန်တော့ ခေါင်းကို သူမခြေဖ၀ါးအား တင်လိုက်သည်။ကဲ…ငယ်ကျွန်ကြီး…သခင်မကျွန်ဖြစ်ရတဲ့အတွက်..ကျေးဇူးတင်စမ်းး။ ဟုတ်ကဲ့ပါ..သခင်မ..သခင်မခြေဖ၀ါးအောက်မှာနေခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..သခင်မ။ မိန်းမတစ်ယောက်၏ ခြေဖ၀ါးဖြင့် ခေါင်းကို တင်ခံထားရတာကို မကျေမနပ်မဖြစ်မိသည့်အပြင် ရင်တွေတုန်ပြီး ၀မ်းသာသလိုဖြစ်နေတာကို ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ်မထင်တော့ပါ..ဒီလိုဖြစ်ခွင့်ရဖို့စိတ်ကူးနဲ့ရူးနေတာကြာပြီမဟုတ်လား။ ဟုတ်ပြီနော်…ကျော်ကျော်…မင်းက ငါ့ရဲ့ငယ်ကျွန်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့..။ မင်းဘ၀ကိုငါပိုင်တယ်နော်….ကြားလား။ ဟုတ်..ဟုတ်..သခင်မ…သခင်မပိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ ဒါဆိုရင် နင့်အ၀တ်အစားတွေ ချွတ်လိုက်စမ်း။ သူမကခေါင်းပေါ်တင်ထားသော ခြေထောက်ကို ဖယ်ပြီး အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရှေ့မှာ ကိုယ်လုံးတီးချွတ်ရမည်မို့ရှက်နေပါသေးတယ်။ ကဲ..သွက်သွက်ချွတ်စမ်း…နင်ကကျွန်ဆိုတော့ အိမ်မှာနေရင် အ၀တ်အစားမ၀တ်နဲ့။ ကိုယ်လုံးတီးနေရမယ်..ကြားလာ…ခုချွတ်ဆိုချွတ်….နာချင်ပြီထင်တယ်။ ဟုတ်ဟုတ်…ချွတ်ပါပြီသခင်မ…သူမအမိန့်ကြောင့် ရှက်ရှက်နဲ့ဘဲ အ၀တ်အစားတွေကိုချွတ်ချလိုက်ရပါတယ်။ ကိုယ်လုံးတီးဖြစ်သွားတာကြောင့် ကိုယ့်လီးလေးကို လက်နဲ့အုပ်ပြီးဖုံးထားရပါတယ်။ နင့်လက်ကနောက်ပစ်ထားစမ်း..အုပ်မထားနဲ့… သခင်မ ရီမို့မို့မောင်ရဲ့ အမိန့်ကြောင့် ရှက်ရှက်နဲ့ လက်နောက်ပစ်ပြီး သူမရှေ့မှာ မတ်တပ်ရပ်နေရပါတယ်။ဟွန်း..သေးလိုက်တဲ့လီးဆိုပြီး သူမကကျွန်တော့လီးကို လက်ဖြင့်ဆုပ်ကိုင်လိုက်ပါတယ်။ နင့်လီးသေးသေးလေးနဲ့ ငါ့ကိုမှန်းမှန်းပြီး..ဂွမ်းထုတယ်ပေါ့..ဟုတ်လား ငယ်ကျွန်ကြီး…သူမမေးတဲ့ပုံစံကသိသိကြီးနဲ့မေးတဲ့ပုံစံမျိုးပါ.။ ဟုတ်.ဟုတ်ပါတယ်..သခင်မ…။ ဒါဆို..နင်..ငါ့ညီမနင့်ဆရာမ ခင်သီတာစိုးကိုရောမှန်းပြီးထုမှာပေါ့။ သူမက လီးကို သူမလက်ချောင်းသွယ်သွယ်လေးတွေနဲ့ လိမ်ဆွဲရင်းမေးလိုက်ပါတယ်။ ဟုတ်..ဟုတ်..ထု..ထုပါတယ်..ဆိုပြီးရှက်ရှက်နဲ့ဘဲဝန်ခံလိုက်ရပါတယ်။
(၆) အဲ့ဒါဆိုရင်…နင်လာခဲ့စမ်း…ငါ့နားကို လေးဖက်ထောက်ပြီးလာခဲ့…။ သခင်ရီမို့မို့မောင်ကကျွန်တော့ကို အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ခွေးလေးတစ်ကောင်လိုပါဘဲ အမိန့်ကိုနာခံတဲ့ အနေနဲ့ သူမနားကိုလေးဖက်ထောက်ပြီး သွားလိုက်ပါတယ်။ သူမနားရောက်တဲ့အခါမှာတော့ သူမနားမှချထားတဲ့ စလင်းဘက်အိတ်ထဲ ကိုသူမကလက်နှိုက်ပြီး တစ်စုံတစ်ခုကိုဆွဲထုတ်နေပါတယ်။ အနားပိုတိုးစမ်း..ငယ်ကျွန်ကြီး…နင့်ကို ဆင်ပေးစရာရှိတယ်..။သူမပြောစကားကြောင့် ရင်တွေခုန်လာပါတယ်..သခင်မကျွန်တော့်ကိုဘာများလုပ်မလဲပေါ့။ သခင်မရီမို့မို့မောင် ဆွဲထုတ်လာတာတော့ သံကြိုးရှည်လေးတွေနဲ့ တွဲထားတဲ့..။ ခွေးလည်ပတ်တစ်ခုပါ..။ ကျွန်တော့လည်ပင်းမှာခွေးလည်ပတ်ကို ပတ်ပြီး သော့ခတ်လိုက်ပါတယ်။ ကြိုက်တယ်..မဟုတ်လား..ငယ်ကျွန်ကြီး..။ သူမအမေးကို ကျွန်တော် ကျေနပ်စွာနဲ့ဘဲဖြေလိုက်ပါတယ်.။ ကျေနပ်ပါတယ်..သခင်မ…။ ကျွန်တော် သခင်မအနားမှာ ခွေးတစ်ကောင်လိုဘဲနေပါရစေ။ ဟင်း..ဟင်း…နင့်ကို ငါက ခွေးတစ်ကောင်လိုဘဲဆက်ဆံမှပါ.. အဆန်းလုပ်လို့ပြောမနေနဲ့….မင်းက ငါချီးကျွေးရင်တောင် မငြင်းဘဲစားရမှာ။ သူမအပြောတွေကြောင့် ကျွန်တော့လီးကလဲပိုတောင်လာပြီး စိတ်တွေလဲလှုပ်ရှားကာ လီးထိပ်က အရည်ကြည်တွေတောင် စိမ့်ထွက်ကုန်ပါပြီ။ ကဲ…ငါဇာတ်လမ်းကြည့်ရင်း ခြေထောက်တွေညောင်းတယ်.။ မင်းကို ငါ့ခြေတင်ခုံလုပ်မလို့…ငါ့ရှေ့မှာ လေးဖက်ထောက်နေ..။ သခင်မရီမို့မို့မောင်ရဲ့ အမိန့်ကြောင့် သူမထိုင်နေတဲ့ ဆိုဖာရှေ့မှာ လေးဖက်ထောက်ပြီး ခစားလိုက်ပါတယ်။ သူမကတော့ဆိုဖာခုံပေါ်ကျောမှီလို့.. သူမခြေထောက်သွယ်သွယ်လေး နှစ်ချောင်းကို ကျွန်တော့်ကျောပေါ်ကို တင်လိုက်ပါတယ်။ အိမ်မက်တွေကတကယ်ဖြစ်လာတာ ခုထက်ထိကို မယုံနိုင်အောင်ပါဘဲ။ သခင်မရဲ့ ခြေထောက်အောက်မှာ ခွေးတစ်ကောင်လို ခြေတင်ထားခြင်းခံနေရတာကို ၀မ်းမနည်းတဲ့ အပြင် ကျေနပ်သဘောကျနေမိပါတယ်။ သခင်မကတော့ ဇာတ်လမ်းတွဲကို ဆက်လက်ရှုစားနေပါတယ်။ သူမလက်ထဲမှာတော့ ကျွန်တော့လည်ပင်းကိုဆွဲထားတဲ့ ခွေးလည်ပတ်ရဲ့ သံကြိုးကို ကိုင်ထားပြီး ဆိုဖာကိုကျောမှီကာ ဇိမ်ယူနေပါတော့တယ်။
(၇) တစ်နာရီခန့်ကြာတဲ့ အခါမှာတော့ သခင်မဟာ ကျွန်တော့ကျောပေါ်တင်ထားတဲ့ သူမခြေထောက်တွေကို ဖယ်လိုက်ပါတယ်။ မလှုပ်မရှားဘဲနေနေရတာကြောင့် ကျွန်တော့ တံတောင်ဆစ်နဲ့ ဒူးတွေကလည်း တော်တော်ကို နာကျင်နေပြီဖြစ်တာကြောင့် အခုမှဘဲအနားရတော့တယ်လို့တွေးမိပါတယ်။ သူမက ထမိန်အထက်ဆင်ကို အသာဖြေလျော့ပြီး သူမထမိန်အောက်ကို လက်နှိုက်လိုက်ပါတယ်။ ဖင်ကိုအသာကြွလို့ဆွဲချွတ်လိုက်တာ.. သူမရဲချည်သား ပင်တီဖြူဖြူလေးဟာ ကျွန်တော့ရှေ့မှာ သူမခြေသလုံးသွယ်သွယ်ဝင်းဝင်း နှစ်ချောင်းကြားက ကျွတ်ထွက်လာပါတယ်။ ကဲ..ငယ်ကျွန်ကြီး..မင်းသခင်မ ထမိန်တွေပင်တီတွေကိုခိုးရှုပြီးဂွမ်းထုနေတာသခင်မသိတယ်။ အဲ့တော့..သခင်မပင်တီခွကြားတွေ နင့်လျှာနဲ့ယက်တာငါကြည့်ချင်တယ်။ သူမဘယ်လိုသိလဲ..မစဉ်းစားတတ်တော့ပေမဲ့..သူမပေးလာတဲ့ပင်တီလေးကိုလက်နဲ့ရိုရိုသေသေယူပြီး သူမရဲ့ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ဖင်နံ့စောက်ပတ်နံ့တွေမွေးကြိုင်နေကာ အရည်လေးတွေစိုစွတ်နေတဲ့ ပင်တီကို လျာနဲ့ အငမ်းမရကို ယက်ပေးပါတော့တယ်။ သူမက ကျွန်တော်သူမပင်တီကို အငမ်းမရယက်နေတာကိုကြည့်ပြီး.. သူမလျှာနဲ့နှုတ်ခမ်းတွေကိုသပ်လိုက်ပါတယ်… သူမထမိန်အောက်ကိုလည်း လက်နိုက်ပြီး သူမအဖုတ်ကို ပွတ်နေပါတယ်။ မျက်နှာမှာ တစ်စုံတစ်ရာကို လိုချင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါက်လာပြီး။ သူမဘယ်ဘက်လက်နဲ့ကိုင်ထားတဲ့ ကျွန်တော့်လည်ပင်းမှာတပ်ထားတဲ့ ခွေးလည်ပတ်ကြိုးကို ဆွဲလိုက်ပါတယ်။တော်တော့်…လာခဲ့စမ်းငါ့ပေါင်ကြားကို..လို့ပြောလိုက်ပြီး ကျွန်တော့ခေါင်းကို သူမပေါင်ကြားကို ဆွဲခေါ်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့ခေါင်းသူမပေါင်ကြားရောက်တဲ့အခါမှာတော့ သူမထမိန်ကိုအောက်စကနေအသာကိုင်ပြီး ဟပေးလိုက်ပါတယ်…ဘာလုပ်ရမယ်မှန်းမသိတာကြောင့်ကြောင်နေချိန်မှာ… နင်ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ..မသိဘူးလား.. ထမိန်အောက်ထဲကို ၀င်စမ်းဆိုပြီး ခေါင်းကဆံပင်တွေကိုသူမလက်နဲ့ခပ်ကြမ်းကြမ်းဆွဲဆုပ်ပြီး ကျွန်တော့ခေါင်းကို သူမထမိန်အောက်ထဲ ဆောင့်သွင်းလိုက်ပါတယ်။
(၈) သူမကကျွန်တော့်ခေါင်းကိုသူမစောက်ပတ်ဆီ ဆွဲယူလိုက်ပြီး ကျွန်တော့နှုတ်ခမ်းနဲ့သူမစောက်ပတ်ကို သေချာတေ့အောင် ထိလိုက်ပါတယ်။ အရေတွေရွဲနေတာကြောင့် သူမစိတ်ထနေမှန်းသိတာပါတယ်..။ ကျွန်တော့ ခေါင်းကို သူမထမိန်နဲ့ ပြန်အုပ်လိုက်တာကြောင့် ထမိန်အောက်ထဲမှာ မှောင်မှဲနေတာပါဘဲ။ အရည်တွေစိုစွတ်နေတာကြောင့် သေးနံ့ငံကျိကျိစောက်ပတ်အရသာကိုနှုတ်ခမ်းကခံစား ရသလို…သူမပေါင်ခွကြားကဖင်နံ့စောက်ပတ်နံ့တွေကို တစ်ဝကြီးရှုရှိုက်နေရပါတယ်။ ကဲ…ထမိန်အောက်ကကောင်ဘာလုပ်နေတာလဲ…နင့်လျာနဲ့သေချာယက်စမ်း..။ အရည်တွေထွက်လာရင် မြိုချ…ဟင်း..ဆိုပြီး ကျွန်တော့ခေါင်းကို… ဒေါက်ခနဲခေါက်ကာ သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း သခင်မခိုင်းစေတဲ့အတိုင်း သခင်မရဲ့ စောက်ပတ်ကိုလက်နဲ့ဖြဲပြီး အတွင်းသားနံရံတွေကို အငမ်းမရယက်ပါတော့တယ်…ပြတ်ပြတ်..ရှုးရှုး…ပလပ်..ပလပ်…. ခွေးတစ်ကောင်လို သခင်မရဲ့အဖုတ်ယက်တဲ့အမှုတော်ကိုသေချာထမ်းရွက်နေပါတယ်.။ သခင်မရဲ့ပေါင်နှစ်ချောင်းနဲ့ ဖင်ကြီးတွေကတစ်ဆတ်ဆတ်တုန်ယင်နေတာကြောင့် သခင်မအရမ်းကောင်းနေမှန်းသိသာပါတယ်။ အ..အင်း…အိုး..ကျွတ်စ်ကျွစ်… သူမလက်တွေက ကျွန်တော့ဆံပင်ကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး သူမစောက်ပတ်နဲ့ ကျွန်တော့ပါးစပ် လွတ်ထွက်သွားမှာ စိုးတဲ့အလား..အတင်းကိုဆွဲကပ်ထားပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း…..သူမစောက်စိတွေရောစောက်ခေါင်းအတွင်းသားတွေကိုရော လျာနဲ့ထိုးထည့်ပြီး မွေပြီးကစားသလို ချိုချဉ်စုပ်သလိုပါစုပ်ပစ်ပါတယ်.. ပြွတ်ပြွတ်….ပြတ်ပြတ်….အား…အိုးဟိုး..သွက်သွက်စုပ်ပေးး…ငါကောင်းနေပြီ.. ပြတ်ပြတ်..ပလွတ်..ပြွတ်…ရှီး..ပြတ်ပြတ်… အီး..အင်း..ကျွတ်စ်ကျွတစ်..အင်း..ဟင်း.. သူမဖင်ကြီးကော့တက်လာပြီး ကျွန်တော့ပါးစပ်ကို သူမစောက်ပတ်နဲ့ အတင်းထိကပ်လိုက်ပြီး သူမရဲ့ ပူနွေးနွေးပစ်ချွဲချွဲနဲ့ စောက်ရည်တွေဟာ ကျွန်တော့အာခေါင်ထဲကို ပန်းထုတ်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်။ချွဲကျိနေတဲ့ ငံကျိကျိသူမစောက်ရည်တွေကို တဖြည်းဖြည်း အရသာခံမြိုချလိုက်ပြီး သူမစောက်ပတ်ကိုပါပြောင်သွားအောင် ယက်ပြီး သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်။
(၉) သခင်မရီမို့မို့မောင်က ကျွန်တော့ခေါင်းပေါ်အုပ်ထားတဲ့ ထမီကိုဖယ်ပြီး မတ်တပ်ထရပ်လို့ ခွေးလည်ပတ်သံကြိုးကိုဆွဲခေါ်သွားတာကြောင့်..။ လေးဖက်ထောက်အနေအထားနဲ့ သူမနောက်ကနေလိုက်ခဲ့ရပါတယ်။ သူမအခန်းထဲကို ခေါ်သွားတာပါ.။ ကဲ..ကုတင်ပေါ်တက် ပြီးရင်ပက်လက်လှန်လို့ အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ နင့်လက်တွေခြေတွေကို ကုတင်တိုင်တွေမှာ ပူးပြီးကပ်ထားစမ်း..ကြိုးတုပ်မလို့။ သူမဘာလုပ်မယ်မှန်းမသိပေမဲ့ သူမအမိန့်အတိုင်း ကုတင်ပေါ်တက်ကာ ပက်လက်လှန်လို့ လက်တွေခြေတွေကို ကုတင်တိုင်မှာ ပူးကပ်ထားပေးလိုက်ပါတယ်။ သူမက ကျွန်တော့်လက်တွေခြေတွေကို ကုတင်တိုင်နဲ့ ပူးပြီး ကားယားအနေအထား ကြိုးတွေနဲ့ တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ချည်တုပ်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့ကို..သတ်..သတ်မလို့လားဟင်..စိုးထိတ်လာတာကြောင့်မေးလိုက်ပါတယ်။ လျာမရှေနဲ့..ပါးစပ်ပိတ်ထားဆိုပြီး လက်တွေခြေတွေကို ချည်ထားတာခိုင်မခိုင်စစ်ဆေးပြီးနောက် ကျွန်တော်မရုန်းနိုင်မှန်းသေချာတဲ့ အခါမှာသူမက ကုတင်ပေါ်တက်လာပါတယ်။ သူမက ထမိန်ကိုပြင်ဝတ်လိုက်ပြီး ကျွန်တော့်မျက်နှာပေါ် ခွရပ်ကာ မျက်နှာကိုသူမတင်ပါးနဲ့ ဖိထိုင်လိုက်ပါတယ်။ အသက်ရှုကျပ်သွားတာပါဘဲ။ သခင်မရီမို့မို့မောင်လက်တွေက တောင်ပြီးထောင်မတ်နေတဲ့ ကျွန်တော့လီးကို သူမကုတင်နား စားပွဲပေါ်က ဆေးတစ်မျိုးယူပြီး သုတ်လိမ်းတဲ့အခါမှာယောင်ကိုင်းလာပြီး ပုံမှန်ထက်ကြီးလာပါတယ်။ နာကျင်လာသလိုဘဲ။ သူမလက်က ကျွန်တော့လီးကိုကိုင်ပြီး ဂွမ်းထုပေးပါတော့တယ်။ကြမ်းတမ်းလှတဲ့ ထုချက်ကြောင့် ဒစ်မပြုတ်သေးတဲ့လီးကပြုတ်ထွက်သွားပါတယ် ငယ်သံပါအောင်အော်လိုက်တဲ့ ကျွန်တော့ပါးစပ်က သူမဖင်နဲ့ဖိထိုင်ပြီး မအော်နိုင်အောင် လုပ်ထားတာကြောင့် အူး..စူး..လို့သာထွက်လာပါတယ်။ အသည်းခိုက်အောင်နာကျင်နေပေမဲ့.သူမထုချက်တွေကမရပ်ဘဲ.. ဒစ်ပြုတ်သွားလို့ သွေးစို့လာတဲ့ လီးထိပ်က နာကျင်မှုကို မျက်ရည်တွေဝိုင်းအောင် ဆက်လက်ခံစားနေရပါတော့တယ်။ အော်မနေနဲ့…နင့်လီးသေးလို့…ကြီးအောင်လုပ်ပေးနေတာ…။ ဒီဆေးက လိမ်းပြီးရင် အရွယ်အစားမလျော့ဘူး…ငါ့စိတ်ကြိုက်ရမှ လွတ်မှာလို့။ သခင်မရီမို့မို့မောင်က ပြောရင်းမညှာမတာ ဆက်ထုတော့တာပါဘဲ။ လီးထိပ်က လရေတွေကလည်း အဆက်မပြတ်ကို ပန်းထွက်ကုန်လို့ပေါ့။
(၁၀) အိုး…ကောင်းလိုက်တာလို့..သခင်ရီမို့မို့မောင်ညဉ်းလိုက်ပါတယ်..။ သူမရဲ့လင်ပါသားလေး ကျော်ကျော်ရဲ့ လီးကသူမအဖုတ်ထဲမှာပြည့်ကျပ်နေပါတယ်။ ဆေးလူးပြီး သူမစိတ်ကြိုက် အရွယ်အစားရောက်နေပါပြီ။ ကောင်လေးရဲ့ လီးကို အပေါ်မှစိတ်ကြိုက်ခွပြီး သူမအဖုတ်နဲ့စိမ်ထားတာပါ။ ကောင်လေးကတော့ ခြေလက်တွေကို ကြိုးနဲ့တုပ်ပေးထားတာပေါ့။ ပါးစပ်ကိုလည်း အ၀တ်နဲ့ဆို့ပြီး မအော်နိုင်အောင်လုပ်ထားတာကြောင့် သူမအလိုကျဘဲပေါ့။ ထိုအချိန်မှာပင် အခန်းတံခါးက ပွင့်သွားပါတယ်။ဟက်..ဟက်…မမို့….ဒီလိုလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့…။ အခန်းတံခါးကိုပြန်စေ့ပြီး နံရံကိုကျောမှီကာ ပြီတီတီကြည့်နေသော သူမညီမခင်သီတာစိုး။ ရီမို့မို့မောင်က လီးကို သူမအဖုတ်ထဲမှာ စိမ်ထားကာဆက်ဆောင့်နေပြီး။ သီတာ..စကားအပိုတွေမပြောနဲ့..ငါကောင်းနေပြီ… နင်ဝင်ချင်ဝင်လာ..သောက်ကောင်မ…နင်အရည်တွေရွဲနေတာငါသိတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ ခစ်..ခစ်…..အဲ့လိုပြောမှပြောပါ့မလားလို့။ ခင်သီတာစိုးက သူမထမိန်ကို ကွင်းလုံးချွတ်ပုံချလိုက်ပြီး ကုတင်ဆီကို တရွေ့ရွှေ့လာနေပါတယ်။ သူမက ကျွန်တော့်ပါးစပ်မှာ ဆို့ထားတဲ့ အ၀တ်ကို ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး.. မျက်နှာပေါ်ကိုတက်ခွလိုက်ပါတယ်။ သူမရဲ့ညှီစို့စို့ရနံ့လေးရနေတဲ့ အဖုတ်လေးက ကျွန်တော့မျက်နှာပေါ်မှာနီးကပ်စွာရှိနေပါတယ်။ ကဲ…ကျွန်ကလေး…သခင်မကိုဘာလုပ်ပေးရမယ်ဆိုတာသိတယ်နော်…ခစ်ခစ်။ သူမနဲ့ရီမို့မို့မောင်ဟာ အပြန်အလှန်နို့တွေကို ပြိုင်တူညှစ်ပြီး အနမ်းတွေဖလှယ်နေကြပါတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ သခင်မခင်သီတာစိုးရဲ့ အဖုတ်လှလှလေးကို ကျွန်တော့လျှာနဲ့ ယက်လိုက်ချိန်မှာဘဲ… သခင်မရီမို့မို့မောင်ကလည်း ကျွန်တော့်လီးကို သူမအဖုတ်နဲ့တေ့ကာ အဆက်မပြတ်ဆောင့်ပါတော့တယ်။ အခန်းထဲမှာတော့ စောက်ပတ်ယက်သံ…အဖုတ်ထဲလီးဝင်/ထွက်သံတွေက ဆူညံနေပါတော့တယ်။ ပြတ်..ပြတ်…ရှီး..ရှီး..ပြွတ်..ပြွတ်…အား…အား… ဖွတ်..ဖွတ်…စွပ်စွပ်…ဘွတ်ဘွတ်….။ ဟိုကောင်သွက်သွက်ယက်စမ်း….ငါပြီးတော့မယ်…..အားအား.. သခင်မခင်သီတာစိုးရဲ့ ညဉ်းသံနဲ့အတူ…. လရေမထွက်အောင် ထိန်းထားစမ်း…ငါပြီးတော့မယ်….. ဖွတ်..ဖွတ်…ဘွတ်..ဘွတ်…သူမစောက်ပတ်နဲ့ ကျွန်တော့်လီးကို ညစ်ညစ်ပြီးဆောင့်ဆောင့်ချနေတဲ့….သခင်မရီမို့မို့မောင်ရဲ့… ညဉ်းတွားသံတွေကလဲ အခန်းထဲမှာ ဆူညံနေတော့တာပါဘဲ.။ သြော်…သခင်မ…သခင်မ… နောက်ဆုံးတော့ ဒါပါဘဲလား။ (ပြီးပါပြီ)